ပါကစ္စတန်မှာ ကိုဗစ်တကြော့ပြန်ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့် သွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ WHO တိုက်တွန်း
ပါကစ္စတန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဖို့နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားသူများ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ မကြာခင်ရက်တွေ အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ အကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် တိုးလာနေတာကြောင့် ဒီရောဂါအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေ နောက်တကြိမ် ပြန်ချမှတ်ပေးဖို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက အကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်က ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေဆီကို WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Palitha Mahipala က အကြံပေးစာ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကန့်သတ်မှုတွေကို သီတင်း ၂ ပတ် ချမှတ်ပြီးတိုင်း နောက် သီတင်း ၂ ပတ် ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ နဲ့ တနေ့ကို လူ ၅ သောင်း ဒီရောဂါပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု လုပ်ဖို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကူးစက်ခံသူက အင်္ဂါနေ့ အထိဆို လူပေါင်း တသိန်းကျော် (၁၁၃ ၇၀၂) ရှိနေပြီး သေဆုံးရသူပေါင်းက ၂၁၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။
ပြည်နယ်အများအပြားအတွက် ရောဂါဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုတွေကို မေလအစောပိုင်းမှာ ဖြေလျှော့ ပေးခဲ့ချိန်ကစပြီး အကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် တိုးလာနေတာဖြစ်ကြောင်းလည်း WHO ကပြောပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ တလအတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်သူ ၅၀၀% တိုး
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရဲ့ စီးပွါးရေးဟာ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲသားတွေအတွက် ပိုထိခိုက်မှု ရှိနေတာကြောင့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အသွားအလာ ပြန်ပိတ်ပစ်ဖို့ ကိစ္စကို ဝန်ကြီးချုပ် Imran Khan ကလက်မခံ ပယ်ချခဲ့တာပါ။
တချိန်ထဲမှာပဲ ဒီရောဂါစတင်ပြန့်ပွါးရာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်က အမေရိကန် ကောင်စစ်ရုံးဟာ သူ့လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား ဒီရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဟာ အံ့သြလောက်အောင်ကို မြန်ဆန်ကြောင်းနဲ့. ဒီ COVID-19 ရောဂါဟာ အဆိုးဝါးးဆုံး ရောဂါ ဖြစ်ပြီး ကပ်ရောဂါကနေ မလွန်မြောက် သေးဘူးလို့ အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါပညာရှင် Dr. Anthony Fauci ကပြောပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါတွေ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်လာဖို့ သာမန်အားဖြင့် ၆ လကနေ တနှစ်လောက် ကြာမြင့်တတ်ပေမယ့် အခု Covid 19 က တလအတွင်း ကပ်ရောဂါ အဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ မကွာခငျရကျတှေ အတှငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ အကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ တိုးလာနတောကွောငျ့ ဒီရောဂါအတှကျ အသှားအလာကနျ့သတျမှုတှေ နောကျတကွိမျ ပွနျခမြှတျပေးဖို့ WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေး အဖှဲ့ကွီးက တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံက အကွီးဆုံးပွညျနယျဖွဈတဲ့ ပနျဂပျြပွညျနယျက ကနျြးမာရေးအာဏာပိုငျတှဆေီကို WHO ဌာနကေိုယျစားလှယျ Palitha Mahipala က အကွံပေးစာ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ကနျ့သတျမှုတှကေို သီတငျး ၂ ပတျ ခမြှတျပွီးတိုငျး နောကျ သီတငျး ၂ ပတျ ပွနျဖှငျ့ပေးဖို့ နဲ့ တနကေို့လူ ၅ သောငျး ဒီရောဂါပိုးရှိမရှိ စမျးသပျစဈဆေးမှု လုပျဖို့ပွောကွားခဲ့တာပါ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အကူးစကျခံသူက အင်ျဂါနေ့ အထိဆို လူပေါငျး တသိနျးကြျော (၁၁၃ ၇၀၂) ရှိနပွေီး သဆေုံးရသူပေါငျးက ၂၁၀၀ ကြျောရှိနပေါတယျ။
ပွညျနယျအမြားအပွားအတှကျ ရောဂါဆိုငျရာ ကနျ့သတျမှုတှကေို မလေအစောပိုငျးမှာ ဖွလေေြှာ့ ပေးခဲ့ခြိနျကစပွီး အကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ တိုးလာနတောဖွဈကွောငျးလညျး WHO ကပွောပါတယျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာရဲ့ စီးပှါးရေးဟာ အထူးသဖွငျ့ ဆငျးရဲသားတှအေတှကျ ပိုထိခိုကျမှု ရှိနတောကွောငျ့ တနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာနဲ့ အသှားအလာ ပွနျပိတျပဈဖို့ ကိစ်စကို ဝနျကွီးခြုပျ Imran Khan ကလကျမခံ ပယျခခြဲ့တာပါ။
တခြိနျထဲမှာပဲ ဒီရောဂါစတငျပွနျ့ပှါးရာ တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျက အမရေိကနျ ကောငျစဈရုံးဟာ သူ့လုပျငနျးတှေ ပွနျလညျပတျနပွေီဖွဈကွောငျး အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဌာနက ပွောပါတယျ။
ကမ်ဘာတလှား ဒီရောဂါပိုး ကူးစကျပွနျ့နှံ့မှုဟာ အံ့သွလောကျအောငျကိုမွနျဆနျကွောငျးနဲ့. ဒီCOVID-19 ရောဂါဟာ အဆိုးဝါးးဆုံး ရောဂါ ဖွဈပွီး ကပျရောဂါကနေ မလှနျမွောကျ သေးဘူးလို့အမရေိကနျ ကူးစကျရောဂါပညာရှငျ Dr. Anthony Fauci ကပွောပါတယျ။ ကူးစကျရောဂါတှကေပျရောဂါ ဖွဈလာဖို့ သာမနျအားဖွငျ့ ၆ လကနေ တနှဈလောကျ ကွာမွငျ့တတျပမေယျ့ အခုCovid 19 က တလအတှငျး ကပျရောဂါ အဖွဈရောကျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
Kashmir အရေး ကုလ ကွားဝငျစစေ့ပျပေးဖို့ ပါကစ်စတနျ ပနျကွား
ကမ္ဘာတလွှားက COVID ကာလ မြင်ကွင်းတချို့
ပါကစ္စတန် ကိုရိုနာကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်မှု
ပါကစ္စတန်မှာ ရထားတွဲတွေကို COVID-19 ကုသဆောင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ
စာရင်းအင်းအခြေခံ ပုံစံယူစနစ်နဲ့ အနာဂတ်ကျန်းမာရေး ခန့်မှန်းနိုင်ခြေ
ပါကစ္စတန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄၈၀ ခန့် ကိုဗစ်ကူးစက်နေ
ပါကစ္စတန် လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ၂ ဦးရှင်၊ ၉၇ ဦး သေဆုံး